USDP agents violate election laws in Amarapura, Mandalay by taking part in voting process (မန္တလေး၊ အမရဘူရတွင် ကြံ့ဖွံ့ပါတီကိုယ်စားလှယ်များ ရွေးကောက်ပွဲဥမဒေချိုးဖောက်ကာ မဲပေးခြင်းလှုပ်ဆောင်မှုအဆင့်ဆင့်တွင်ပါဝင်) | Burma Election Tracker
USDP agents violate election laws in Amarapura, Mandalay by taking part in voting process (မန္တလေး၊ အမရဘူရတွင် ကြံ့ဖွံ့ပါတီကိုယ်စားလှယ်များ ရွေးကောက်ပွဲဥမဒေချိုးဖောက်ကာ မဲပေးခြင်းလှုပ်ဆောင်မှုအဆင့်ဆင့်တွင်ပါဝင်) Posted in abuse of government authority
Party Agents Violate Election Law
AMARAPURA, Mandalay—Nyi Nyi Kaw, who represents independent candidate Dr Than Myint, said two Union Solidarity Development Party (USDP) agents were taking part in the voting process in breach of the election law at 6:45 a.m. at polling station No.9for Hman Tann Ward in Amarapura Township. The party agents, Min Min and San Win, represent Moe Naing Kyaw, the USDP candidate for Constituency 1 of Amarapura Township in the Mandalay Division Parliament. When Nyi Nyi Kaw officially complained to the polling officer, the officer said: “Do I have the right to stop them?” Nyi Nyi Kyaw said the officer appeared to be afraid of the USDP candidate's polling station agents.
ကြံ့ဖွံ့ပါတီ၏ ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးသည် အမရဘူရမြို့နယ် မန်းတန်ရက်ကွက် မဲရုံအမှတ် (၉) တွင် နံနက် ၆:၄၅ နာရီတွင် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကို ချိုးဖောက်ပြီး မဲပေးမှုတွင်ပါဝင်နေခဲ့သည် ဟုတသီးပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါက်တာသန်းမြင့် ကိုယ်စားလှယ် ညီညီကော်ကဆိုသည်။ အဆိုပါကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးမှာ မန္တလေးတိုင်းပါလီမန်အတွက် အမရဘူရမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်မြေ (၁)တွင် ဝင်ယောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သော ကြံ့ဖွံ့ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်း မိုးနိုင်ကျော်ကို ကိုယ်စားပြုသူများဖြစ်သည်။ ညီညီကော် မဲရုံတာဝန်ခံတွေကို တရာဝင်တိုင်ကြားတော့ “သူတို့ကိုတားဖို့ ငါမှာအခွင့်အရေးရှိလို့လား” ဟုမဲရုံတာဝန်ခံက ပြောပြောခဲ့သည်။ မဲရုံတာဝန်ခံက မဲရုံကကြံ့ဖွံ့ပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေကို ကြောက်ရွံ့နေရပုံပေါ်ကြောင်း ပြောသည်။